Al Qaacidda oo 10 Askari Ku Dishay Weerar Cusub oo ka dhacay Wadanka Burkino Faso.
Saturday December 29, 2018 - 06:32:45 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khasaara lixaad leh ayaa ciidamada dowladda Dabadhilifka Burkina Faso kasoo gaaray weerar gaadma ah oo xoogag jihaadi ah ay ugu geysteen deegaan dhaca xuduud beenaadka ay la wadaagto wadanka Maali ee mandiqadda Saaxilka qaaradda Afrika.
Wararka ka imaanaya Burkina Faso ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 askari oo Burkiiniyiin ah ladilay 3 kalane ladhaawacay kadib markii ay xoogag hubeysan weerar dhabbagal ah u dhigeen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada Booliska waqti ay ku socdaalayeen deegaanka Tuweyni oo xuduud beenaadka kulaala.
Bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Burkina Faso ayaa lagu xaqiijiyay in ugu yaraan 10 askari looga dilay weerarka oo ay ku sifeysay in uu ahaa mid argagaxiso.
Clement Suadugu oo ah wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Dabadhilifka Burkina Faso ayaa telefeshinka afka dowladda ku hadla u sheegay in xilligii ciidamadu weerarka lakulmayeen ay kusii jeedeen tuulada Loorooni ee xuduudda Maali dhacda si halkaasi ay roonddo uga sameeyaan.
Weerarkan ayaa loo malaynayaa in ay fuliyeen xoogaga Jamaacada Ugargaaridda Islaamka iyo muslimiinta ee ka jihaada wadanka Maali islamarkaana caanka ku ah beegsiga ciidamada Q.Midoobe iyo kuwa dowladaha Afrika ee qeybta ka ah duullaanka wadankaas lagu qaaday.
Sedaxdii sanadood ee lasoo dhaafay ciidamada Melleteriga iyo kuwa Booliska dowladda dabadhilifka Burkina Faso ayaa wajahayay weerar dhiig badan ku daatay oo uga imaanayay xoogaga jihaadiga ee Jamaacada ugargaaridda islaamka iyo Muslimiinta oo katirsan Alqaacidada Maqribul Islaami.
Burkina Faso ayaa safka hore uga jirta isbaheysiga Faransiisku dhisay ee G5 isbaheysigaas oo duullaan saliibi ah ku qaaday wadanka Maali waxaana ku mideysan illaa 5 dowladood oo dhanka mandiqadda Saaxilka qaaradda Afrika.